Kulankii Bisadaha – Cabdicasiis Guudcadde
June 11, 2017 June 11, 2017 Guudcadde
Haddii bisadaha madoobi ay saaka soo dheereeyeen, dorraadba waxa safka hore taagnaa bisadaha huruudda ah ee gaagaaban, oo maanta aan weli imanba. Waa adduunyo oo waa hadhkaa labadiisa gelin, ayuu curriga casi isku qanciyay isaga oo u sii luudaya dhanka hoolka loo goleeyay shirka bisadaha.
Laba gu’ ayaa la wadwaday sidii kulan loogu qaban lahaa bisadaha ay kaga hadlaan dantooda iyo darayadooda. Maantaba waa kaas kulankii u eg mid qabsoomaya. Cadceedda sii dhacaysa iyo dayaxa soo weydaaranaya in lala sugayo shirka, ayay u eeg tahay. Waayo sida warqadda ogaysiiska ku qornayd, kulanku waa “Shir Sheellan.” Bisadaha qaar, siiba kuwooda xaafadaha kawaanka xoolaha ka fog, ayaa eraygaasi ula eekaaday “shiilan” maaddaama cadka keli ah ee ay uriyaan yahay mid la shiilo, balse mar danbe ayaa lagu wargeliyay in eraygu la ujeeddo yahay “qarsoon.” Haa, shir qarsoon!
Xanshaashaqa gudaha ka socda, iyo buuqa bannaanka ka oogan, waxa ka hadhsan inta cadceeddu dhacayso. Currigii talada hayay iyo bisaddiisii weli ma ay iman.
Shalay waxa isgacansaaray bisaddii Dhoyla’ iyo currigii dhawaanta qooq-gaadhay ee Dhaliye. Dhoyli’ waxa ay ka xanaaqday daandaansiga iyo dibadwareegga uu ugu baaqay Dhaliye, oo magacuba ugu baxay farabaaskiisa. Dabadeedna way xagatay. Isaguna wuu candhuufeeyay, waxaana ku oriyay bisado badan oo ceeb u arkayay lab dheddig candhuufaynaya halkii uu ka cayuuqi lahaa!
Dagaalkoodu meel xun buu gaadhay. Oo waxaaba la sheegayay in Dhaliye uu doontay curri kale oo sabbaaxadda ku fiicnaa, halka Dhoyli’ ay isugu yeedhay bisado ay isku xaafado ahaayeen, oo sidii ay mergiyo u cunayeen geedkaa le’ekaaday. Inta badan Dhoyla’ waxa lagu xaman jiray, oo magacanba loogu bixiyay, in ay hacoo aan waxba kala ogayn tahay, baraadkeeduna hooseeyo. Balse markan way beenisay naanaystaa. Dirirta maalintaa dhacday waxa ku dhaawacmay shan bisadood iyo labadii curri (Dhaliye iyo saaxiibkii). Dhoyli’ waa ay ka badbaadday, oo safka danbe ayay gashay.
Hawshaa soo korodhay shalay ayaa ay soo furdaaminayaan labadii taliye. Kulankuna in uu daaho ayaa la filayaa.
Asalka bannaanba, aragtida shirku waxa ay ka soo unkantay wadahadal dhexmaray Feydan iyo Falan oo ah labo bisadood oo caan ka ah xertooda. Waxa ay iswayddiiyeen marxaladda ay marayaan bisaduhu iyo waxa la gudboon. Waxa ka qiiraysiiyay kulan faq ah oo ay lahaayeen daanyeerro marmar kawaanka yimaadda, oo islaamaha muuska ka dafa. Waxa ay daanyeerradu ka tashanayeen maaddaama dumarkii muuska laalaadsan jiray ay isdhimeen, waxa la yeelayo. Waxaana midkood soo jeediyay in sariibadda loo guuro. Sidii baanay ku guddoonsadeen. Maalintaa ayaa labadan bisadoodna ay gashay hammiga ah in bisadaha xaalkooda la qiimeeyo.
Feydan, oo ah bisad buuran dhulkana u dhaw, midabkeeduna madaw labo liid oo cadcad weheliyaan yahay, ayaa si weyn u danaynaysay arrinta. Falan iyada waxa wax kasta kaga weynaa sidii ay caatannimadeeda ula dagaalami lahayd, oo ay ugu soo noqon lahayd sidii ay beri u buurnayd. Intaa ay Feydan duryamayso, Falan waa ay is-eegaysaa. “Bl sidaan u dhuubtay eeg. Ma anigaa waxba ka nool. Naa eeg eeg, waxaasi waa xidid! Iga walle xataa haddii ey i soo weerarto, aniga waxba igama sii jiidayso. Malaha taasi waaba faa’ido. Hadday faa’ido tahay maannu noolaanno, saw annaga xataa aan lafaha feenan karin!” Marba eray caynkaa ah ayaa ka dallacma.
Feydanna way ku xanaaqday markii danbe. “Danteenna ayaynu ka hadlaynaa e, maxaad sheegaysaa horta? Bisadihii oo dhan baa dhimanaya, markaasaad dhuubni ka hadlaysaa. Wax isku fal, oo waad falan tahay e, na dhegayso. Waxaannu kaala hadlaynaa sidii loo wada naaxi lahaa e.” Falan baa inta ay qaylisay, ku tidhi: “oo adigana yaa kaala hadli doona sidii aad u dhuuban lahayd? Mise baruur kale ayaad iimaanli’idaada rabtaa? Horta inta aad cadkayaga ninka hiliblaha ah ee casi na siiyo afka u dhigatid, adiga iyo currigan xun ee aad wada socotaan ee kaa buurani, maxaad iskaga kaaya dhigtaan kuwo dantayada wada? Wixiinnu waa dibbira-dhacsi dee! Danta bisadaha haddii aad rabtid, waa sidii adiga oo kale loo wada noqon lahaa; ama aniga oo kale la isugu biya-shuban lahaa. Ma aqbalayno in bisadaha naaxnaaxay nagu wacdiyaan muhiimadda ay leedahay in la dhuubto!!”
Sida lamafilaanka ah ee ay Falan u gardhiibatay, ayaa aamusiiyay Feydan. Casarka ay wada fadhiyeenna sidaas ayuu ku dhammaaday.
Labo toddobaad ka dib, ayay Feydan u timi Falan iyada oo wadata siddeed bisadood oo sida Falan caato ah balse ku qanacsan soojeedinta Feydan. Goor duhur ah, ayay u soo gashay tiiyoo cad tahar ah jiidjiidaysa. “Naa hoo kan,” ayay ku tidhi inta ay ku soo tuurtay waslad hilib saafiya ah. Falan, oo saw nafi hayso, ayaa inta ay is-illawday si miyirla’ dig uga siisay wasladdii. “Waa taa danta aannu ku lahayn ka hadal,” ayay Feydan ku tidhi Falan iyada oo fadhiisanaysa, bisadihii la socdayna u tilmaamaysa in ay salka dhulka dhigaan.
Sababta Falan looga maarmi la’ yahay waa aftahannimo aan gabbasho lahayn oo ay awood u leedahay in ay bisadaha jihayso. Shir aanay Falan ka khudbayn shir ma noqonayo, ayaa ay Feydan rumaysnayd. Sidaas baana run ahayd oo, saddex gu’ ka hor waa tii labada qoys ee bisadaha ah ku kala hagoogatay. Qoysas iska laayay bisado badan, waa tii ku qancisay in ay hubka dhigaan, oo waanwaan aqbalaan. Dhacdooyin taasi u weynayd bay Feydan tixraacaysaa.
Falan oo dhiiggii hilibka iska leefleefaysa, ayaa jawaab aanay filayn kaga maxsatay Feydan: “horta hilibkan aad i siisay muxuu ahaa; ma ku dad, mise mid dameer? Beryahaaba ma arag hilib noocan ah e?” Feydan baa kula kaftantay, “Naa adiga ayaa hilibkii ka raagay, oo tahar iyo ganac ku meeraysan jiray e hilibku waa dhaylo!” Inta ay dhoolacaddaysay, ayay ku tidhi, “Horta Feydaneey, arrintii Sabtidii hore ayaad iila socotaa, oo aad kuwan kala aragga xunxunna iigu soo kaxaysatay saw ma aha?” “Haa,” ayay tidhi Feydan iyada oo bisadihii midkood madaxa u salaaxaysa. “Waa bisado caqli fiican oo tashada garanaya.” “Oo haddaa ma aniga ayaan tasho garanayn?” “Maya, maya. Adiga yaa caqli kugu gaadhaya! Waad yar fududdahay mooyee!” Way qosqosleen.
Maalintaa ayay isku raaceen in ay wadashaqeeyaan. “Af wax cunay xishood,” ayaa ku rumoobay Falan. Waxaanay oggolaatay in bisadaha madaw iyo kuwa huruudda ah la isku diro. Oo weliba huruudda la dayriyo. Maaddaama, ayay Feydan ku sababaysay, ay iyagu yihiin kuwa inoogu socodka badan ee saylad ilaa sariibad iskaga kala goosha.
Xasaradda ay halkaa ka xidheen baa sababtay in shirkan la qabto. Markii hore shirka waxa lagu micneeyay mid lagaga tashanayo aayaha bisadaha, balse waxa soo caddaanayay in uu yahay kulan lagu tolayo aayabbeelka bisadaha.
Shilkii shalay ka dhex dhacay Dhoyla’ iyo Dhaliye in la soo xaliyay, oo currigii iyo bisaddii talada hayay imanayaan ayaa la soo sheegay. Feydan iyo Falan oo aan la kala garanayn, ayaa soo galay. Waa labadii bisadood ee kala aagga ka qadhaabsan jiray, oo maanta labaduba naaxnaaxay! Maya e, dheh Falan baa naaxday!
Kulankii baa furmay. Aayado bisadeed waano u badan baa la akhriyay. Sida ay aayadahaasi u dhacayaan, iyo qaabka loo soo xushay, ayaa durbadaba shaki gelisay bisadaha soojeeda. Waa aayado wada dhiillo iyo kicin ah.
“Nimaan dhididin ma dhergayo, oo nimaan cid raacin ma dhaqmayo,” ayay tidhi Falan oo khudbadda qaadatay. “Sidaa darteed, waxa la rabaa in aynu kala dooranno sariibadda wada mergiyada ah iyo kawaanka wada taharta ah.” Iminka ayaa la fahmay in loo socday sidii loo kala dooran lahaa deegaanka bisaduhu ka midha-midhaysan doonaan. Waxa kale oo lagu baraarugay in labadan doorasho ee ay Falan kala siisay yihiin “ismadhaanto.” Tahar iyo mergi.
Bisad casuus ah, shaarbo miiqan, oo koone yar fadhida, ayaa eray ku darsatay. “Oo maxaad inoo kala dooransiinaysaa mergi jiidjiidmaya iyo tahar jiidjiidmaysa? Maad inoo sahamisaan aag hilib saafiya aynu ka helayno?” “Bal sheeg adiguba, bal sheeg dee! Dibusocod mijo dhuudhuuban. Waxaas oo miidhan baa muwaafaqadeenna dilaya. Waa in aynu kala dooranno, weliba kuwa shinbiruhu doorteen aynu raacno,” ayay Falan oo xanaaq iska muujinaysaa aamusiin iyo amar isugu dartay bisaddii casuusta ahayd iyo bisadaha kalaba.
Arrinta shinbiraha, oo ay xustay Falan, aad looma fahmin. In yar baa ka warhaysay in shinbiro iyo ey isqabteen, oo ay isku hayaan deegaanka ugu habboon ee hilib laga heli karo. Dabadeedna shinbiruhu ay shiid iyo sharaftir isugu dareen eydii. “Waa ey. Waa wasakh wuxu. Waa nijaas. Faddarada ayay faafiyaan. Iyaga ayaa quudiya cadawgeenna oo dhan,” iyo dacaayado wax ka jiraan, wax badan oo been ahina ku jiraan, ayaa eydii laga faafiyay.
Shinbiruhu maaddaama ay ka badan yihiin, kana fursado badan yihiin eyda aan baalasha lahayn, dacaayaddii shinbiraha ayaa aad loo qaadaadhigay. Tii baa Feydan iyo Falan isku waafaqeen in ay qaybtooda ka qaataan, iyaga oo u soo maraya in dan ugu jirto bisadaha.
Sidaas bay Falan ugu dhiirratay in ay bisadaha la hortimaaddo waxaas. Xan baana jirtay ah in shinbiruhu kalluun badan siiyeen bisadahan hawsha wada.
Bisaddii su’aasha ka keentay arrintan iyo dhawr u guuxayba, inta lagu buuqay ayaa lagu dhawaaqay in bisaduhu hindisaha shinbiraha raaceen.
Kulankii Bisaduhu in uu tahar iyo mergiyo kala doortay, ayaa beryo dhan lagaga sheekaysanayay xerooyinka xayaawannada kale. Taariikh maad loo soo qaato ayayna u noqotay xayawaan badan; balse utun murugo wadata ayay u noqotay facyadii danbe ee bisadaha. Waxaan se weli la garanayn sababta bisadihii huruudda ahaa ee gaagaabnaa u soo xaaddiri waayeen Kulankii Bisadaha.
Previous Sidee Yuhuudi u soo Muslimayaa iyaga oo Muslimiintu Sidan Yihiin?
Next Fasiridda Qur’aanka Habkee u Habboon?